Forum serasera malagasy Grand pere hafa kely sady mampihomehy - Dinika forum.serasera.org
Grand pere hafa kely sady mampihomehy
Fitohizan'ny hafatra : Grand pere hafa kely sady mampihomehy
alexandra32 - 23/09/2017 06:56
Misy koa, mandeha eny an dalana, i ra baina be no mi conduire aminio (attention fa 77 taona izy fa mbola mahafehy tsara'no sady kinga), fa misy an'ireny maano depassement abusif ireny fa ataony mahazo farce mihitsy.... misy an'izany klaxonner ny papapapapapapapapapa tsisy farany, na koa ataony psssst psssst mafy fa tena tonga miherika zay tratra no sady rangitra.
Vao volant vitsivitsy izay, nisy lehilahy Frantsay izay, izany aloha Tonga dia hita hoe malt fijery so lady mpanambany…mandoha vola eo amin’ny caisse ao @ grande surface ao ankorondrano izay, fa Tonga dia notenen’i zokinay « mmmmmhhhh, nice sunglasses, mate!! I bet they’re not french-made », fa tena hita lay vazaha eto Dago hoe tena vazaha visant fa miseo manalika fotisny, fa tena tsy nahatena na mot iray aza sairia tens Anglisy. Tao antan Air France koa, hiverna eto dago ny zokiko fa veo Tonga anta avion, dia tena le frantsay maloto saina ireny no betsaka, fa ny azy aloha, Tonga dia ataony mahita Ary ny faonany, dia Tonga dia harabainy mafy tsars @ teny Anglisy no mode Asiana hoe « how are ya doing, mate ? », na « yeah, what’s going on…good???? », fa tena Tonga ire dia tsy mahavita mamaly fa mihondrika mandositra ao anaty magazine mihitsy ny masony ary tsy sahy manatrikanao. Dia teo Roissy teo koa, juste à la sortie, aisy vazaha visant izay, tsy aiko inona ny probleme-ny, na ni se moquer izy an’i mamanay. Fa rendra hitan’ny zokiko play geste, Ary tonga dia najanony ny chariot dia notebahiny play vazaha nataony hoe: « hey mate…. How are you… you sure your re doing fine ?…you ain’t look like it ??? », fa tena zany re loon, fa tena niodina tsaika ho tapa-tende ilay vazaha valaka Ary toy nijanona ninety an’i zokiko no lady manontany tena enjamba hoe…tena say ve ianao mitaney anglisy amiko, izaho vazaha be its? Fa ny zokiko aloha toy miraharahy fa icy dia tena sahy (contrairement à beaucoup de Jeunes dispo manna be loatra) Ary iczy, tena vitany ny mi-tenir tête olona ratsy saina fa tena tsy matahotra izy na inona na inona…tsy aiko hoe lay nianatra any @ firenena miteny Anglisy ve dia lasa sahisahy be? Tao Paris tao koa, aisy olona nanavakavaka izay Ary aotrany annao fiteny raciste, fa Tonga dia nobetrohany t@ teny Anglisy hoe « you do not have respect for anyone, go and screw yourself », dia namely play Fantsay hoe « rentrez chez vous », fa novaliany hoe « I got nothing to do in this country full of stupid people like you » dia nakarapony be play varavarana ka nainjery mihitsy aza ilay mannequin, tao Paris 13 tao izany no nitranga.
Fa une fois indray, tao Lyon, aisy manifestation izay, dia mise an’ireny bus fend CRS ireny. Imho sy izy ao anaty taxi, dia somari mitohana ny alalana. Tonga eo @ le CRS izay aza le Taxi, fa tena nangarihan’ny zokiko ilay camion feno CRS fa tena nitodika daholo ry zareo, fa zany hoe, try afar manenjika satria bus be le izy no lady izahay koa ao anaty taxi ka Etsy fiaranay le izy, doen tissu hazon’ireo atao… fa tena hitako tezitra be ireo polisy frantsay nohon’ny ataony.
DADABE TSY METY RETRAITE ZALAHEEEEE
I dadhabe-ko ihany koa rehefa lagy, dia mikitika olona koa no fataony. Mise an’izany Frantsay mividy spaghetti izany, fa tena kitihiny no amin’io, izy lasa comme si de rien n’était. Mise une fois izay koa, camion feno Emmo ireny, fa arahina 4x4 fend deba ao Ariana, dia amin’io try maints mijanona miandry daholo ireo fiara miakatra avy aty Masay. I Mr l’avocat de Diego suarez amin’io no eo @ volant, fa ny nataony, nandefasany code phare ilay camio be, ka nierika ara ireo ourangoutang au chocolat tao, ary tonga dia nasian’i lery clin d’oeil efa inin-6 sa 7, no mbola napiany bisous bisous @ molotra. Izay ao ariana tapa tsinay satire iretsy, na marotte aza, try afaga aninona sairia patron be isany ao aoriana ka na faly na Etsy faly, tsy mahazo mijanona, na midina fa tafahitsoka eo @ derriere eo fotsiny ny sous-phyphre.
Une nuit, t@ restaurant izay tétons tant, andeha isakafo izahay. Dia eo @ fidirana, misy an’ireny securite be ireny ary tonga ary izahany dia nampandroso ireo securite 2 lahy. Tampoka eo, tonga dia nananihany i dadabe, ary nanaovany style karaté ilay sécurité ira. Tes aloha, nanontany tena ry zala hoe fa inn its resale ity? Indadabe amlin’io mody manao frappe no lady mitent hoe: iny ny an’iala , iny ny an’iala, iny ny an’iala, iny ny an’iala, iny ny an’iala, apres gamba 5 secondes, mode nanan film koa le sécurité dia mode hoe « aie aie aie ra papa, aza coniina re papa fa kamboty ny zanakay aaaaa » « aie aie mitonna re ra papaaaaaaaa », osa reeee tena andriamanitra aaaaa », i dadabe amin’io iny lety, mboila apivo an’ity koa, iny int no lady mbola manao style totondry ihany. Fa tena niherika no sady tsisy nahateny daholo ireo olona nisakafa tao @ restaurant, ny sasany moa, nisy amusés ihany nahits @le film be tao ivelany.
TANDREOM KOFONA REHEFA MISAKAFO
Fa efa ini maromaro ihany izay, amin’ireny restaurants sasany feno vazada Irene, miss moa indraindray ry jar irony mimehy may, aotrany dia hoe tanning its Madagascikara ity, hoy ny dadabe-ko, ka ahy hoy izy, tsy hanaiky an’izany. Ny fanaony, dia andrasany mihisty himehy ireo vazaha, dia vita zay, manomboka mitantara anecdotes isan-karazany izy, sasy izy, dia hananany mihitsy io satira efa betsaka moa no lavatra hitany t@ fihainany. Atombony aza irei tantarany mampihomehy, ary ataony izay himezan’ny rehetra, fa izy kosa, miaraka @ anadahiko, dia mimehy mivatravatra sady mady no en plus koa, lady maharitra try mise aotran’izany….ianao efa miheritreritra hoe tapir play fimehezana, icy bola mahita courage ihany himehezana sady mafy, no ela no mikotroka be; any ka, ireo vazaha Etsy aspita miseo mimehy maf aza, fofoca, ary lasa mipiripirina, matadora fa Lisy Malagasy masahy manindry azy. Une fois koa, toerana haha, aisy indo-pakistanais roa lahy nijerijery be an’ahy sy nr ravaviko, hita mihitsy hoe olona malato fisainana izy roa lahy ireo. Hitan’ny baina be aza lay izy ary bola try naninona moa aloha izy tao fa ny zokiko no tonga dia nivandravandra be azy no lady aotrany notent Anglisy indray, any ka nipirina koa izy roa lahy fa tonga vaina angmaba hoe Malagasy maranin-tsaina no izy no any amin’ilany. I dada nefarious bola try afar ny fohony ary navelany nandeha daholo aloha izahany no ny vita ny salado, iza kay aminio, mifampijery icy sy ilat bandy roa lahy, ary au dernier moment, naissant an’ireny clin d’oeil inin-telo ireny ilat olona no lady try nanampo na celi aza, any ka kofona mihisty ny ira t@ ry jareo.
Fa zay ry zareo, tampitra eto ireo tantara fa tena izy aloha, dia rangaha azo atao hoe mahafinaritra Ary tsotra, fa icy koa rehefa tezitra, dia tena tzitra @ foho koa. Aminy izany, tsy dia fanoany ny mida @ olona rehefa tezitra, fa aleony manao an’ireny fihetsika ireny hoy izy satria ireny, tsy mampiakatra tension kanefa ahazahona fahafam-po. Toy aikido hoe zay ve no ma inoxydable azy satire izy efa be taona, nefa tena mboma mavitrika ara tsaina, ara batana, ary na miteny aza izy, dia try mitandrevaka,izany.